कुकुरले कसरी पत्ता लगाउँछ अपराधी ? निर्मला हत्या प्रकरणमा किन प्रयोग गरिएन कुकुर ?(भिडियो) - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
Tuesday, May 17th, 2022 ,
२०७९ जेष्ठ ३, मङ्लबार
कुकुरले कसरी पत्ता लगाउँछ अपराधी ? निर्मला हत्या प्रकरणमा किन प्रयोग गरिएन कुकुर ?(भिडियो)
सोमवार, अशोज १५, २०७५ (October 1, 2018, 12:47 pm) मा प्रकाशित
सोमवार, अशोज १५, २०७५, ।
नेपाल प्रहरीले कहिलेकाहीँ अनुसन्धानमा पोख्त अधिकारी र प्रविधिले हार खाएका कतिपय जटिल अपराधका गाँठा कुकुरको सहायताले फुकाएको छ । निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानमै ‘कुकुर’ प्रयोग गरिएन भन्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाइयो । नागरिक घटना अनुसन्धानमा प्रहरीभन्दा कुकुरको बढी विश्वास गर्छन् भन्ने सत्य तथ्यलाई यसले झनै स्पष्ट पा¥यो । उता, कास्की पुम्दीभुम्दीकी दस बर्षीया श्रीया सुनारको हत्यारा कुकुरले नै पत्ता लगायो ।
यसले कुकुरप्रतिको विश्वास झनै बढायो । धेरै यस्ता घटना छन्– जसको रहस्य तालिम प्राप्त कुकुरले पत्ता लगाएको छ । अपराध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीसँग पोलिग्राफ मेसिन, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, डिएनए प्रोफाइलिङ युनिट, अटोमेटिक फिंगर प्रिन्ट आइडेन्टिफिकेसन सिस्टमजस्ता प्रविधि छ । र, यि बाहेक प्रहरीसँग अर्को भरपर्दो विधि छ– ‘कुकुर’को प्रयोग ।
लिजा, रेस्क्यू, सिया, जोली, ब्रुक, जुलेट, भुन्टी, सोल र डेनी अब्बल अनुसन्धान अधिकृत भन्दा पनि अब्बल छन् अपराधि पहिचान गर्न । २०२७ सालमा २ जवानलाई मलेसियामा तालिम गराएर ल्याएपछि नेपाल प्रहरीले कुकुरको प्रयोग गर्न थालेको हो । २०३२ सालदेखि अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको व्यवस्थित प्रयोग गर्न थालेको प्रहरीसँग अहिले ८० वटा कुकुर छन् । तीन महिनाको आधारभूत तालिम दिएपछि क्षमताअनुसार वर्गीकरण गरिएका कुकुरलाई अनुसन्धानमा प्रयोग गरिन्छ । रोचक के भने जतिसुकै आधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तार भएपनि अपराध अनुसन्धानमा कुकुर प्रयोग झनै बढ्दो छ ।
नेपाल प्रहरीले भारत, थाइल्याण्ड, बेलायत, अमेरिकालगायत देशबाट ल्याइएका विभिन्न प्रजातिका कुकुरका छाउरालाई ६ महिना पुगेपछि तालिम दिन सुरु गर्छ । सुरूमा तीन महिनाको आधारभुत तालिम दिइन्छ । यस अवधिमा कुकुरलाई अनुशासित बनाइने, मान्छेसँग घुलमिल हुन सिकाइन्छ । कुकुरलाई तालिम गराउन सक्षम प्रहरी जवानलाई ‘ह्यान्डल’ गरिन्छ । एउटा कुकुरलाई एक जनाले नै ह्यान्डल गर्छन् । किनकी कुकुरले जसले तालिम दियो उसैको मात्र निर्देशन मान्छ । अपराध अनुसन्धानमा जहाँ–जहाँ कुकुरको प्रयोग भएको छ, त्यहाँ प्रहरीलाई अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो भएका उदाहरण अनेकौ छन् ।
नेपाल प्रहरीसँग अहिले ट्रयाकर, एक्सप्लोसिभ, सर्च एण्ड रेस्क्यू र ड्रक्स सर्च गरी चार विधाका कुकुर छन् । सुँघ्ने क्षमता बढी हुने भएकाले अपराध अनुसन्धानमा लगाइने तालिम प्राप्त कुकुरले अपराधी पत्ता लगाउँछ । प्रत्येक मान्छेमा हुने गन्ध फरक–फरक हुन्छ । एक व्यक्तिको औंठा छाप अर्कोसँग नमिलेजस्तै मान्छेको गन्ध पनि कसैसँग मिल्दैन । अपराध भएको ठाउँको सबुत प्रमाणमा भएको गन्ध सुँघेर कुकुरले अपराधमा को व्यक्ति संलग्न छ, पत्ता लगाउँछ ।
घटनास्थलमा कुनै सबुत प्रमाण नछाडे पनि मान्छेको पाइलाको गन्ध सँुघेर कुकुरले अपराधी पत्ता लगाउँछ । कुकुरको इसारा अनुसार ‘ह्याण्डलर’ले अपराधी पक्रन्छन् । प्रहरीका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका घटना छानबिनको लागि झण्डै १ सय ६० प्रतिशतले तालिम प्राप्त कुकरको माग बढेको छ । जुन माग धान्न कुकुरको संख्यासँगै केन्द्रीय प्रहरी कुकुर तालिम केन्द्रको क्षमता बढाउन र सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ
कुकुरको सफलता अनुसन्धान र तालिम
नेपाल प्रहरीमा करिब ७० हजार कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये अपराध अनुसन्धानलाई शिघ्र, प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रहरीले ८० वटा कुकुरको प्रयोग गरिरहेको छ । अपराध अनुसन्धानमा जहाँजहाँ कुकुरको प्रयोग भएको छ, त्यहाँ प्रहरीलाई अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो भएको उदाहरण छ ।
मंगलबार पोखराको पुम्दीभुम्दीमा बलात्कारपछि हत्या भएकी श्रेया सुनारको हत्यारालाई प्रहरीको कुकुरले नै फन्दामा पारेको हो । त्यस्तै, शुक्रबार पोखराकै खुदीखोलामा ढुंगाले टाउकोमा हानी हत्या भएकी श्रीमाया गुरुङको अनुसन्धानमा पनि कुकुर नै परिचालन गरिएको थियो । कुकुरले तत्कालै उनकै श्रीमान्ले हत्या गरेको पत्ता लगायो ।
बिहीबार धादिङबाट पोखरा जाँदै गरेको ग १ ख २६७६ नम्बरको बसमा लुकाइछिपाइ ल्याइएको लागूऔषध जाँचको क्रममा कुकुरले कारोबारी फेला पार्यो । यतिमात्रै होइन, पछिल्लो समय विस्फोटक पदार्थ र लागूऔषध पत्ता लगाउन, भीआइपी तथा भीभीआइपीको सुरक्षादेखि ठूला हत्याकाण्ड अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग भएको छ । तर, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भयो । जहाँ अपराधी पत्ता लगाउन कुकुरको प्रयोग भएन, गरिएन । घटनास्थललाई ७२ घण्टासम्म सुरक्षित राखेर कुकुरको प्रयोग गरिएको भए तत्कालै निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्ने दाबी गर्छिन्, कुकुरलाई तालिम दिँदै आएकी एसपी देउती गुरुङ ।
तालिमप्राप्त कुकुरको प्रयोगले प्रहरी अनुसन्धान सहज भएको भनिरहँदा केही विवादास्पद घटनामा कुकुरको प्रयोग किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कुकुरको प्रयोगबाट प्रहरी अनुसन्धान निकै चुस्त भएको प्रहरी अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । कुकुरले अतिसुक्ष्म अनुसन्धानमा उल्लेख्य सहयोग पु¥याउँदै आएको उनीहरुको भनाई छ ।
कुकुरलाई अपराध अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको तालिम दिने गरिन्छ । जसका लागि नेपाल प्रहरीले बेग्लै विभाग नै बनाएको छ ।
कुकुरलाई दिइन्छ तालिम ?
कुकुरको सुँघ्ने क्षमताकै आधारमा तालिम दिने गरिन्छ । मूलतः अपराध अनुसन्धानका लागि कुकुरसँग तीन प्रकारको विशिष्ट गुण हुन्छ । सुघ्नेसँगै हेर्ने र आज्ञाकारी र बफादार स्वभाककै कारण कुकुरलाई अनुसन्धानमा प्रयोृग गर्न सकिने प्रहरी कुकुर तालिम केन्द्रकी प्रमुख एसपी देउती गुरुङ बताउँछिन् ।
अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग सार्थक बन्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीमा अहिले रहेको ८० वटा कुकुरले जति काम गरिरहेको छ, सङ्ख्या र कुकुरको प्रयोग बढाउने हो भने अपराध अनुसन्धान चुस्त हुने निश्चित देखिएको छ । तर, नेपालमा कुकुरलाई तालिम दिने दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ ।
टी-२० श्रृङ्खलामा पीएनजीमाथि नेपाल १५ रनले विजयी
गठबन्धन नहुँदा मैले नै बालबाल जितेको हुँ, पहिला धेरै साथीहरुले हारेको हैन –देउवा
लम्की चुहाका स्वतन्त्र मेयर पदका उम्मेदवार कृष्ण बटालाको चुनाब चिन्न आँप
बजगाई एसोसिएट र दिपदेभ बिजनेस एडभाईजर द्वारा लम्कीचुहा अस्पताललाई ३१,५०० सहयोग